Umhlahlandlela wokugcina womnikazi wohlobo lwe-Alaskan Malamute - Izinhlobo
Abizwe ngothando Ububi , i-Alaskan Malamute iwuhlobo olukhulu futhi iyi- i-canine enkulu ye-spitz yohlobo lwe-Arctic .
Zinezici ezifana nezempisi futhi ziyizinja ezisebenza kanzima ezenzelwe ukuhamba ibanga. Kepha ingabe iMalamute egxile emndenini ikhona ephaketheni lakho? Qhubeka upheqa ukuthola futhi ukuthola.
Umlando: Ivelaphi i-Alaskan Malamutes?
Ibukeka kanjani i-Alaskan Malamute?
Ngabe i-Alaskan Malamute iyizinja ezinhle zomndeni?
Ukunakekela i-Alaskan Malamute yakho
Impilo: Ihlala isikhathi esingakanani i-Alaskan Malamute?
Ibiza malini malamute ye-Alaskan?
Amaqiniso nokuqokomisa mayelana ne-Alaskan Malamute
Ukudiliza izinzuzo nezingozi ze-Alaskan Malamutes
Ukufunda Okuqhubekayo: Ama-Alaskan Malamute Mixes
Ukuba enye yezinja ezindala kunazo zonke , kukholakala ukuthi ama-Alaskan Malamute avela enkathini yePaleolithic. Lokho okungenani eminyakeni eyizi-10 000 edlule!
Igama labo lisuselwa esizweni sama-Inuit esihambahambahamba esibizwa ngokuthi “Mahlemiut.” Bahlakulela uhlobo ukuzingela izimvu zamanzi namabhere asezindaweni eziphakeme, ngaphandle kokuthi izinja zezihlibhi kwakusho ukudonsa imithwalo esindayo .
Futhi babeyizingubo ezifudumele ebusuku.
Ngaphandle kobukhulu bawo, le fido ethembekile futhi emnene ihlala eduze nemindeni yabo yabantu. Ngeshwa, bona kucishe kwaphela ngesikhathi sokushawa kwegolide ngo-1896.
Umjaho wezinja wawuthandwa kakhulu, kanti ama-Alaskan Malamute awelelwa nezinye izinhlobo ukuze kwenziwe i-canine esheshayo. Lokhu kwaholela ekunciphiseni i-Malamute bloodline.
Uhlobo lwasindiswa yindoda egama lingu-Arthur Walden, eyaqala ukukhula I-Kotzebue Malamutes . Lolu hlobo oluthile lwadluliselwa kuNkk. Ava Seely, kwabe sekuvela ezinye izinhlobo ezimbili - i UM'Loot noHinman .
Ngesikhathi seMpi Yesibili Yomhlaba, kwaqashwa abakwaMals ukuthutha imithwalo futhi basetshenziselwa ukufuna nokutakula. Ngenxa yombango wezepolitiki ngesikhathi sohambo oluya e-Antarctica, lezo zinja zabhujiswa.
Ngemuva kokubhujiswa kwabo, iAmerican Kennel Club (AKC) - ebivele kuphela ubunzima be- 'Kotzebue' kuze kube yileso sikhathi - ivule ukubhaliswa kwazo zontathu lezi zinhlobo.
Ama-malamute afakazele ukuqina kwawo nokuhlolwa kwesikhathi. Namuhla, wonke amaMals avela ku Ch Toro weBras Coupe , ukuze ukuhlanganiswa kwazo zonke izinhlobo ezintathu .
Isikhathi esiningi, iMalamute ivame ukwenza iphutha njengeyayo USuskyan Husky umzala, kodwa ziyizinhlobo ezahlukene .
Njengama-AKC's ukuzala okujwayelekile , I-Alaskan Malamute izinja ezinemisipha emihle futhi ezifubeni ezijulile ezinesimo sokuziqhenya. Ekhanda labo elibanzi kukhona izindlebe ezingunxantathu nesifonyo esikhulu, esikhulu.
Uma uzibuza ukuthi nabo bangaba namehlo aluhlaza okwesibhakabhaka, kuthathwa ngokuthi 'yiphutha lokungafaneleki.' Amehlo abo amise okwe-alimondi kufanele abe nsundu noma abe mnyama.
Lokhu yinto okufanele uyikhumbule uma uhlela ukuthola iMal yezinhlelo zezinja.
Ekupheleni komzimba wabo kunomsila onoboya obukeka njengeplamu evunguza.
Ungaphuthelwa: Izinja ezibukeka njengezimpisi
Ukuphakama okumaphakathi nesisindo se-Alaskan Malamute
Uma ubona iMalamute ekhule ngokugcwele imi eduze komuntu, kwanele ukwenza noma ngubani azizwe esaba. Njengakwezinye izinhlobo, le pooch i-dimorphic ngokocansi - abesifazane bancane kancane kunabesilisa .
Ama-Malamute asezingeni ajwayelekile ame phakathi Amasentimitha angama-23 no-25 (58 no-63.5 cm) ehlombe bese unesisindo Amakhilogremu angama-75 ukuya kuma-85 (Ama-34 kuye kuma-39 kg).
Zibuye futhi ngosayizi omkhulu. Ungahle ubone i- I-Giant Alaskan Malamute ku-Facebook noma ku-Instagram, kepha angakhula aze afike kumasentimitha angama-89 anesisindo esingaphezu kwamakhilogremu angama-86.
Kuthiwani ngama-Malamute ama-Alaskan amancane? I-Alaskan Klee Kais kuthengiswe njengezinguqulo ezincanyana, kepha empeleni kuyingxube yamaHuski amabili ahlukene.
Noma ngabe ufuna iMalamute ejwayelekile noma enkulu, le doggo ngeke ngijabule ngamafulethi . Kufanele bahlale ekhaya elibanzi lapho bengasebenza khona futhi badlale ngokukhululeka.
Ijazi nombala: Ingabe i-Alaskan Malamute hypoallergenic?
Cha, azilungele ukwaliwa komzimba. AmaMals chitha ngokulinganisela unyaka wonke bashaye amajazi abo ngenkathi ethile.
Bane- ijazi elikabili yakhiwe ngejazi eliphezulu elijiyile nelide ngokweqile, nengubo yangaphansi ephindaphindayo yoboya, echazwa njengamafutha.
I-Alaskan Malamute inoboya obukhazimulayo obuza ngemibala ehlukahlukene futhi inhlanganisela yegrey ekhanyayo enombala omnyama, obomvu, kanye ne-sable shades, enezimpawu zobuso ezimhlophe . Ngemicimbi yokuhlanganiswa, umbala okuwukuphela kwawo oqinile ovunyelwe umhlophe.
Ungaphuthelwa: Okudingayo ukwazi nge-White Malamute engavamile
Ungavumeli lezi zimfanelo ze-canine zokuba namandla nokuhlala isikhathi eside zikwesabise. Abanikazi abaningi bale purebred bazokutshela ukuthi yi isilwane esihle kakhulu sokuba nemindeni enolwazi lokunakekela inja enkulu .
Futhi, ngicela ubhekele ukuthi bangokhokho bokuhlakanipha kanye nezimpisi. Ngakho-ke bazodinga ukuba nabantu abanesandla esiqinile kodwa esinothando ukuze babaqeqeshe.
Okungabhekwa njenge-alpha yepakethe.
Ngabe i-Alaskan Malamute iyingozi?
Noma yisiphi isilwane esinesizinda sokuzingela sijwayele ukubikezela noma sibe nolaka. Kepha kuze kube manje, ukuqeqeshwa okufanele kanye nokuxhumana nabantu kusenesikhathi kubonakala ngathi kuyayixazulula le nkinga.
Okungaphezulu kwalokho abangakwenza kungamabomu.
Ngokumangazayo, awukwazi ukuthembela ku-Alaskan Malamute ukuthi ube yinja yokuqapha ngoba yibo enobungane kakhulu .
Abanye abantu babheka i-Alaskan Malamute njengezidlakela ezimnene ezingakwazi nokukhuthaza amakati. Buka le vidiyo ukuthi uNiko noPhil basebenzisana kanjani noMilo, ikati.
Basenayo i- ukushayela okuphakeme kwemvelo okuphakeme , ngakho-ke qiniseka UKUHLOLA njalo ukuxhumana phakathi komngane wakho woboya nezinye izinja, izilwane ezifuywayo ezincane, ikakhulukazi nezingane.
AmaMals ngokuvamile akhetha ukuba nobungane babantu kunabadlali abadlala nabo abanoboya, kubenze babe ngcono emndenini wesilwane esisodwa lapho bengalawula khona konke ukunakwa.
Uma uvumela isilwane sakho ukuzijabulisa, qinisekisa ukuthi ikhaya lakho liboshwe ngokuphepha ngocingo olungamamitha angu-6 ubude futhi ligqitshwe phansi.
I-Alaskan Malamutes ingabantu abemba futhi ingakhuphuka kahle kakhulu. Kuyinto engokwemvelo enezintambo ezinzima kubo, ngakho-ke kufanele uphile neqiniso lokuthi ungakwazi ukuqeqesha lokhu kuziphatha kubo.
Ongakwenza ukufundisa i-pup yakho ukumba endaweni ekhethiwe.
Ngabe i-Alaskan Malamutes ikhonkotha kakhulu?
Uma uhlela ukuthola eyakho i-Alaskan Malamute, kungcono wazi ukuthi bafana nezimpisi ezincamela ukukhuluma noma ukuphimisela ngokuhhewula, hhayi kakhulu ekukhonkothweni.
Zilungiselele izikhathi zokuhhewula njengoba noma yini ingazisusa - izinhlabamkhosi, ezinye izinja zikhonkotha, noma lapho zikhuluma nawe nje.
Ukukunikeza umbono wokuthi lokho kuzoba njani, bheka le vidiyo yokukhala kukaCedar nomngani wakhe omncane ongumuntu.
Kungaba ngcono uma ungashiyanga lolu hlobo lodwa. Abajabuli ukuchitha isikhathi bebodwa isigamu sosuku, ikakhulukazi usuku lonke, noma kungenjalo, bazobhubhisa.
Sibancoma ukuba baye emakhaya lapho kuyohlale kunomuntu ozohamba nabo.
Ngaphandle kokuzilolonga, ukuzivocavoca umzimba, nokudla, kufanele wazi ukuthi yi-Alaskan Malamute ukugcinwa okuphezulu futhi angikwazi ukuhlala ngokunethezeka endaweni efudumele.
Ngoba bazalelwe ukuma sezulu esiqandayo, futhi banengubo eminyene, noma yini engaphezulu kwama-degree angama-80 (26.6 ℃) ithathwa njengeyashisa kakhulu kubo.
Ziyizilwane ezifuywayo zasendlini futhi zingadinga ngisho ikhaya elinomoya opholile. Kungcono ukugwema ilanga futhi ube nokufinyelela emanzini ahlanzekile ngaso sonke isikhathi.
Izidingo zokuzilungisa ze-Alaskan Malamute
Imvamisa, amaMals kufanele abe njalo ibhulashi kabili kuya kathathu ngesonto , kepha njengoba zilolonga kabili ngonyaka - entwasahlobo nasekwindla - ukuxubha kufanele kwenziwe nsuku zonke kusetshenziswa ifayili le- ibhulashi le-slicker noma i i-undercoat rake ukunciphisa ukuchitheka.
Ama-malamute ajoyina imicimbi ye-conformation agezwa masonto onke, kepha njengezilwane ezifuywayo, akudingeki ukuthi kwenziwe kaningi. Uma uzibuza ukuthi ngabe iMalamute inuka yini, akunjalo, ngenxa yabo ijazi elikhethekile elingenaphunga, lokuzihlanza .
Uma uhlala endaweni ebandayo noma ehlanzekile, ukugeza inja yakho kube kanye noma kabili ngonyaka kwanele .
Ungase futhi ugeze umngane wakho woboya lapho kudingeka, njengalapho eba ongcolile ngenkathi esebenza noma edlala, kodwa zama ukukwenza yelula kumaviki ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili ngaphandle ukuvimbela ijazi lakhe ukuthi lingomi.
Ukuxubha amazinyo kufanele kwenziwe kathathu ngesonto, kanti izindlebe kufanele zihlolwe masonto onke ukuthola izibungu nezimpawu zokutheleleka.
Coba izinzipho zakhe njalo ukuze zingagugi futhi ziqhekeze, okubuhlungu enjeni.
Qala le mizila yokuzilungisa njalo ukuze uMal pup wakho ajwayele. Ngeke ufune ukubambana nenja enkulu ukuze ubambe izidladla zayo noma uxubhe amazinyo.
Ukudla: Yini edliwa yi-Alaskan Malamute?
Inani nohlobo lokudla kwenja ondla isilwane sakho kufanele isuselwe kunesisindo sesilwane sakho, ubudala, imetabolism, kanye nempilo .
Izindwangu ezomile ezisezingeni eliphakeme ziyindlela enhle kakhulu, kepha futhi ungazama i- ukudla okuluhlaza. Ukubamba - kuyabiza, kuyinkimbinkimbi ukulungiselela, futhi kudla isikhathi.
Kufanele futhi wazi ukuthi iyiphi ukudla kwabantu ziphephile futhi aziphephile ngama-canines.
AmaMals aziwa ngokuthi 'ama-feeder alula' futhi angaphila ngokuncane kakhulu. Cishe izinkomishi ezi-2 zokudla kwenja okufanele zikwenze , kodwa mhlawumbe badinga okungaphansi kwalokhu okunikezayo, ngakho-ke zama ukunciphisa ukuphatha , gwema ukondla ngokweqile, bese uhlukanisa izidlo zibe izabelo ezimbili.
Ukubhekana nokusondeza kwakho kwe-Malamute
Banamandla amakhulu njengosayizi wabo, okusho ukuthi bazodinga ukuvuselelwa okuningi ngokomzimba nangokwengqondo. Lwela i- okungenani ihora elilodwa kuya kwele-2 lokuvivinya umzimba ngosuku .
Kepha uma unomdlwane wase-Alaskan Malamute, ungadluli eminyakeni yakhe yokuqala emibili yokuphila . Vumela umzimba wakhe ukuba uvuthwe, ikakhulukazi amathambo akhe ngaphambi kokuthi umgijime noma uhambe izintaba.
Lokhu kungavimbela nokugula okufana ne-dysplasia.
Uma ufuna ukuzama imisebenzi ehlukene elungele ingane yakho enoboya, hamba uyobhukuda. Kunomthelela ophansi emzimbeni wakhe osemncane futhi kusiza ekuchithekeni kokulawulwa.
Ngabe udinga umuntu ozokusiza ngemisebenzi? Ama-malamute athande ukuba nenjongo ! Hhayi kuphela ukuthi bazojabula sledding noma ukushushuluza eqhweni, kodwa futhi nokwenza umsebenzi.
Ama-malamute izinja eziqinile ezine- isilinganiso sobude besikhathi sokuphila seminyaka eyi-12 kuya kwengu-16 . Into enhle ngemigqa yozalo ukuthi banerekhodi elisunguliwe lokuthi bathambekele kuphi.
Lolu lwazi lungakusiza ukuthi uthathe izindlela zokuvimbela .
Kuluhlu olubanzi impela, kepha akusho ukuthi uMal wakho uzoqinisekiswa ukuthi athuthukise okukodwa noma okuningi kwalokhu kuphazamiseka.
Kuzohlala njalo kuncike ekuzalelaneni kanye nohlobo lokunakekelwa abanikazi babo abanikeza kona.
Izinkinga zempilo yamazinyo nezomlomo
I-Alaskan Malamute inethuba eliphakeme lokukhula kokubola emazinyweni nasezinsinini zabo, ngakho-ke inhlanzeko yomlomo ibalulekile.
Ukutheleleka kungadala izinkinga zesibili enhliziyweni yabo, esibindini, ezinso nasemalungeni. It inganciphisa ngisho nempilo yabo ngonyaka owodwa kuya kwemithathu .
Zijwayele futhi ukugcinwa kwamazinyo e-puppy - lapho amazinyo e-puppy angawi. Ngokuya ngobukhulu, kungahle kudingeke ukuthi kususwe.
Okuthile ngalolu hlobo kwenza kube lula ukuthola izifo ezithathelwanayo nezibulalayo njenge parvo, amarabi, kanye ne-distemper .
Inqobo nje uma usesikhathini ngamashothi akhe, akufanele ube nokuthile okuzokukhathaza.
I-Alopecia X yisifo sesikhumba esithinta izinja ezinezinwele kuphela - asilunywa noma sibuhlungu. Kubangelwa i-hormone gland engasebenzi kahle engalungiswa kalula ngokuvala inzalo.
Noma iyiphi i-canine etholakala ukuthi inalesi simo akufanele ifuywe.
I-dermatosis ephendula iZinc kungadala ukuthi ijazi lakho leMal libukeke kabi ngenxa yokushoda kwe-zinc futhi liphathwa ngalo izithako ze-zinc .
Abaningi iyefana ne-eczema, kepha yisimo esikhethekile ezinjeni kuphela. Uzobona amabala amile, anezikhala futhi angahlakulela ukutheleleka kwesibili, okuzonwaya.
Inja yakho ingahle ikhule kuyo noma ihlale iyinkinga yokuphila kwakho konke.
Ukukhuluphala ngokweqile kuyinkinga ejwayelekile ezinja eziningi ezinkulu zokuzala, okungaholela ezinkingeni ezihlangene. Lokhu kungaphathwa kalula ngokudla okunempilo nangendlela yokuphila esebenzayo.
Gwema ukondla imvuthuluka yetafula lesilwane sakho sasekhaya. Akukhona nje ukuthi lokhu akunampilo, kodwa futhi kuzokhuthaza nokuziphatha okungathandeki njengokucela.
I-Elbow ne-hip dysplasia ngesinye isifo izinhlobo eziningi ezinkulu ezinazo. Kungabangelwa futhi ngenxa yokukhula ngokushesha okukhulu.
Yingakho sincoma ukuthi ama-pups anamathele emisebenzini emnene kodwa emnandi ukugwema ukuhlunga amalunga abo ngaphambi kokuba akhule ngokugcwele.
Akunandaba ukuthi uneminyaka emingaki, ukukhuluphala ngokweqile kungandisa izimpawu njengokulwela ukuhamba. Ukutholwa kusenesikhathi kungcono ngoba, kwezinye izimo, ukuhlinzwa kungadingeka.
Lokhu kukhubazeka kofuzo kubangelwa ukukhula okungajwayelekile, futhi njengoba kungazuzwa njengefa, ochwepheshe abaningi ababancomi ukuthi bangazalwa.
Ama-malamute ane-dwarfism azoba mfushane kunokulindelekile. Yize bengezwa buhlungu, bona izobukeka ikhubazekile .
Izinja ezifakwe emiphongolweni njenge-Alaskan Malamutes zithambekele ekuthini ukuqunjelwa noma isisu . Lokhu kungabulala ngoba inja yakho ayikwazi ukukhipha umoya omningi.
Uma ubona i-pooch yakho iphinda ilanda kungekho lutho oluzayo, noma endaweni yokuthandaza isikhathi eside, mlethe kudokotela wezilwane ngokushesha. Ukuhlinzwa kungenzeka kuyadingeka.
Lesi sifo sezinzwa siyabulala izinja, futhi labo abasinda kuso ngokuvamile badinga imishini yokusiza ukuze baphile impilo ejwayelekile. Kunzima ukuxilonga njengezimpawu ezinjengobuthakathaka, ukucabanga okubi, ukulahlekelwa ibhalansi, kuvamise ukubonakala lapho umdlwane unamasonto ayisishiyagalombili ubudala .
Qaphela i- I-Polyneuropathy , kanjalo. Kuba nomphumela wokuxakaniseka okungaba mnene kuya kokubi, kepha kungaze kubulale.
Uma ungakwazi ukuthola incazelo yokuthi kungani inja yakho ikhuluphela noma ijazi layo liyacipha, kungaba inkinga ye-thyroid ebangela ukungalingani kwamahomoni.
Izinkinga zokuziphatha ezinjengokuhlukumeza noma ukwesaba kwesinye isikhathi zingabonakala.
Udokotela wezilwane wakho othembekile uzokwazi ukunikeza isilwane sakho iphilisi ukuze sidlule kukho.
I-Progressive Retinal Atrophy (PRA) kanye ne-cataract nakho kuvamile e-Alaskan Malamutes. Ngenkathi lokhu kokugcina kungalungiswa ngokuhlinzwa, i-PRA ayibuyiseki futhi izodala ubumpumputhe.
Abazalisi abanedumela baqinisekisa ukuthi isitoko sabo sokuzala sidlula ekuhloleni izakhi zofuzo ze-PRA ukuze kuqinisekiswe ukuthi bayasicacisa lesi sifo.
Okunye ukuphazamiseka kwamehlo okuvamile kubizwa I-VKH Syndrome . Kwenziwe kwaba kubi kakhulu ukukhanya kwelanga, esinye sezimpawu zayo ukuguqula umbala omnyama ku-Mal yakho ube upinki.
Kungaba buhlungu futhi kungadala ukungaboni.
Kukhona nobumpumputhe bezinsuku noma IHemeralopia. Kubonakala ngokungafuni kwesilwane sakho ukungena elangeni nokuba nezinkinga emini kuphela. Lokhu kuvame ukukhombisa cishe amasonto ayisishiyagalombili.
Ukuquleka kuvame ukuzuzwa njengefa futhi kukhombisa ukuthi uneminyaka ephakathi kwezinyanga eziyisithupha neminyaka emithathu.
Uma i-Malamute yakho ikhombisa izimpawu zokuquleka, qala ukwelashwa ngokushesha okukhulu ukukugcina kulawulwa.
Izinja ezinesifo sikashukela zidinga imijovo ejwayelekile ye-insulin njengoba imizimba yazo ingakwazi ukugaya ushukela osegazini lazo.
Hlela ukuvakashelwa kudokotela wezilwane uma ubona ukuthi iMalamute idla, iphuza, futhi ichama kaningi, kuhambisana nokwehlisa isisindo.
Ama-Mals anempilo ende, futhi le nkinga yezempilo ivamile ezinjeni ezindala, ngakho-ke amathuba alo hlobo lokuthola umdlavuza aphakeme kancane.
Ngenxa yobuchwepheshe, kuvame ukwelashwa ngokuhlinzwa noma ngamakhemikhali.
Lokhu kuphazamiseka kwegazi kubangela ukujiya okungavamile ezinjeni, kanti iMalamute ivame ukutholakala ukuthi inakho lapho ilimala.
Abanye bathola kuphela ukuthi isilwane sabo sine-hemophilia ngaphambi kokuhlinzwa, njengoba odokotela bezilwane kuzofanele benze isivivinyo ngaphambi kokwenza inqubo.
Ama-canine ahlupheka ngalesi simo akufanele afuywe ngoba angadluliselwa ngofuzo.
Enye into ethinta izinja ezinkulu izifo zenhliziyo. Gcina iMal yakho ngokuyiyeka ngokuhlolwa konyaka.
Umdlwane we-Alaskan Malamute ungabiza noma yikuphi phakathi $ 2,200 no- $ 6,500 . Intengo incike ohlwini lozalo lwabazali, indawo okuzalelwa kuyo kanye nokuthandwa kwayo, kanye nenani lamazinyane atholakalayo.
Ungalindela 6 kuya ku-8 imidlwane kudoti , kodwa kube khona amarekhodi e- kuze kufike ku-12 amazinyane .
Labo abavela kulayini wezinja zokubonisa babiza kakhulu kunalezo ezifuywa ezilwaneni ezifuywayo ze-Malamute kanye nama-canine asebenzayo.
Ngaphambi kokukhokhela umdlwane noma ukusayina inkontileka, qala ngokuhlangana nabazali bayo kanye nabalahla udoti. Lokhu kuzokunikeza umbono wesimo somdlwane nokubukeka.
Ungacela futhi umfuyi amarekhodi ezokwelapha ezinja kanye neminye imibhalo ebalulekile ukuqinisekisa ukuthi ziphilile kusukela ekuzaleni kuze kufike lapho kuzalwa khona amazinyane.
Kungaba ngcono uma ubuza nokuthi bazowubuyisa yini umdlwane uma ungasakwazi ukuwunakekela. Umfuyi ohlonishwayo uzojabula kakhulu ngokunikela amazinyane awo ikhaya laphakade.
Abalimi be-Alaskan Malamute & izinja
Uma uzizwa sengathi usukulungele ukuthenga umdlwane wakho we-Alaskan Malamute, nanka amawebhusayithi ambalwa anamaMals athengiswayo.
Ama-Northern Lites Alaskan Malamutes (IBurton, OH)
I-Ghost Dance Alaskan Malamutes (I-Alpine, TX)
I-Illusion Malamutes (IPalmyra, MI)
Asikwazi ukufakazela laba bathengisi be-puppy, kodwa sikucebisa ukuthi wenze ucwaningo lwakho bese ulungiselela uhlu lwemibuzo ukuze uqiniseke ukuthi usebenzisana nomfuyi onomthwalo wemfanelo. Ngenkathi uku-inthanethi, ungahlola futhi ama-Mals ku- Indawo yeMakethe ye-AKC .
Izinja ze-Alaskan Malamute ezizokwamukela
Isikhathi esiningi, ama-crossbreeds agcina esezindlini zokukhosela, kepha ngisho nezibalo ezihlanzekile zithola ngeshwa.
Abanikazi banezizathu ezihlukile, okudabukisayo ukuthi abanye bathola izinja ezinjengeMalamute ngoba bebecabanga ukuthi kungakuhle ukuba nenja enjengempisi, kanti abakakulungeli ukuphatha futhi babe nalolu hlobo lohlobo.
Yingakho sincoma kakhulu ukutholwa kwanoma ngubani ofuna isilwane. Ikakhulukazi uma ungumnikazi wezinja ongumakadebona owaziyo ukuthi lolu hlobo lunjani, ungakwazi nikeza izingelosi zoboya ezilahliwe ithuba lesibili .
Bheka lezi zindawo zokuhlenga ama-Mals. Ezinye zazo zize zinikeze izingxube ze-Alaskan Malamute ongazithola zihle futhi zinobuntu obufanelana nendlela ophila ngayo:
I-Illinois Alaskan Malamute Rescue Association (Mt. Prospect, IL)
Ukutakulwa Kwe-Alaskan Malamute kwaseNyakatho Carolina (ICreedmoor, NC)
Indawo yaseChesapeake Alaskan Malamute Protection (IBerryville, VA)
Ama-Alaskan Malamute asezinhlakeni eziyishumi ezihamba phambili ezinamandla zezinja. Bangakwazi ukudonsa imithwalo kufika ku-3 300 lbs (1,500 amakhilogremu).
Yize zihamba kancane kunezinye izinja ezi-sledled, iMalamute ingahamba ibanga elide ngenxa yamandla nokuqina kwayo.
Uhlobo lweMalamute yinja yombuso yase-Alaska esemthethweni.
Uma ungumnikazi wezinja okokuqala ngqa, ungathola uhlobo lwe-Alaskan Malamute ludinga futhi luyinselele ukulusingatha.
Yingakho sibancoma kubanikazi abanolwazi nemindeni ejwayele ukuba nenja enkulu njengesilwane esifuywayo.
Ngaphezu kwalokho, bona unamajazi aminyene futhi afuyelwa izindawo ezibandayo , ngakho-ke ngeke bakwazi ukuma izimo zezulu ezishisayo. Uma uhlala ezweni elishisayo, lokhu kungasho izikweletu eziphezulu zikagesi.
Ngaphandle kokuba namazinga aphezulu wamandla nezidingo zokuzilungisa eziqinile, noma iyiphi i-Alaskan Malamute ehlanganyele kusenesikhathi futhi yaqeqeshwa ngokufanele, izinja ezisebenza kanzima ezingamatheli athembekile .
Ucabangani ngalolu hlobo? Noma iyiphi indaba ofuna ukuyaba mayelana neMal yakho? Sitshele konke ngakho ngokushiya amazwana ngezansi.
Izingxube ezingama-23 ze-Alaskan Malamute
Izibonelo Zomhlaba Zangempela Ezi-7 Zolimi Lomzimba Wezinja ezinezithombe nemibuzo
amagama ama-siberian husky wabesilisa
ama-poodles ahlanganiswe ne-shih tzu
ingxube ye-pit bull terrier labrador retriever
i-red heeler izinkomo zenja yase-Australia
ithoyizi poodle kanye ne-cocker spaniel mix
inja enjani i-goldendoodle